nyaspirateurdesite [wiki ifg]
Writing /home/infogasy/domains/wiki.infogasy.net/public_html/data/cache/7/7557afec4fdc563ce95882dae269d365.xhtml failed
09/05/2005 Mpanoratra : DotMG
Ny aspirateur de site. Lafy ratsiny ho an' ny mpitantana sehatra (webmestre).
Fitaovana iray ny aspirateur de site ahafahana mandika izay ao anatin’ ny sehatra iray ho ao anatin’ ny solosainao, ka dia afaka mamaky izany ianao avy eo tsy mila fifandraisana amin’ ny tranonkala intsony (offline). Ohatra iray amin’ izy ireny ny HTTrack. Ho an’ ny mpitsidika (surfeur) aloha dia tsy misy holazaina firy fa dia mampihena ny vola mivoaka ny fampiasana azy ireny. Ny zavatra tokony hotsipihina fotsiny angamba dia tokony hametraka azy ireny ny syberkafe manindrahindra ny fahalalahan’ ny mpampiasa internet, izay hoe ireo syberkafe mamela ny mpanjifa hampiasa malalaka ny espace disque-n’ ny solosaina.
Ho an’ ny mpitantana sehatra (webmestre) kosa dia misy ny lafy tsarany ary misy ny lafy ratsiny.
Ny lafy tsarany dia ho an’ ireo sehatra maniry hanaparitaka ny votoatiny amin’ ny olona rehetra. Indraindray mantsy rehefa compresse ilay votoatin’ ny sehatra aspire iny dia ifampizaran’ ny mpitsidika, koa na olona tsy manana internet aza dia afaka mahita izany amin’ ny alalan’ ilay fichier zip.
Tsy horesahina be ny amin’ izay lafy tsarany izay fa ny lafy ratsiny kosa dia azo zaraina toy izao :
Eo aloha ny “plagiarisme” : Raisiko ohatra iray ny sehatra tononkira.serasera.org. Ifandrimbonan’ ny mpitsidika ny mametraka tononkira ao, kanefa rehefa aspire izay sehatra izay dia mety ho ampiasain’ ny olona ho fitadiavam-bola mety hamono an’ io sehatra io, satria tsy maka alalana na amin’ ny tompon’ ny sehatra na ny mpikambana ao. Raha toa ka sehatra miaina amin’ ny dokambarotra koa dia mety hihena ny herin’ izany dokambarotra izany.
Mampitombo ny fandaniana bandwidth : Raha manao aspiration-na sehatra iray ny mpitsidika, mety ho ny 5 isan-jato amin’ ny document aspire ihany no tena mahaliana azy, fa fandaniam-poana fotsiny ny ambiny. Ny fisesisesin’ ny fitakiana takelaka koa dia azo inoana fa manela ny hafainganan’ ny sehatra, raha kelikely vovokaina ny host.
Misy ihany ny fomba hiadiana aminy kanefa tsy tena mahomby loatra, jereo ery amin’ ny faran’ ny takelaka ery.
httrack : http://www.httrack.com
hiadiana amin’ ny aspiration : http://www.httrack.com/html/abuse.html
nyaspirateurdesite.txt · Novaina farany:: 2008/09/11 12:43